Indlela Yokulungiselela I-Chemistry Lab - Iinkqubo Zengaphambi Kwebhabhi
I-lab yobhaliso yinkalo efunekayo yezifundo ezininzi zekhemistri. Ukufunda malunga neenkqubo zebhu kunye nokwenza iimvavanyo kukunceda ufunde ubuchule kwaye uqinise iingcamango zencwadi. Yenza ixesha lakho kwilebhu ngokubakho kwizale ezilungiselelwe. Ukuphonononga ezi ngcebiso ngaphambi kokuba uqale uvavanyo.
Gcwalisa nayiphi na i-lab yezabelo okanye umsebenzi wesikolo. Ulwazi kunye nezibalo zenzelwe ukwenza i-lab yokusebenza ngokukhawuleza kwaye kulula.
Yazi indawo yendawo yokukhusela ibhanti kwaye uyayiqonda indlela yokuyisebenzisa. Ngokukodwa, yazi indawo yokuphuthuma kwexesha eliphuthumayo, isilumlilo somlilo, isitishi sokuhlamba kweso kunye nesisa sokuphepha.
Funda ngokusebenzisa uvavanyo ngaphambi kokuya kwibara. Qinisekisa ukuba uqonde amanyathelo ovavanyo. Jonga phantsi nayiphi na imibuzo enayo ukuze ukwazi ukuwabuza ngaphambi kokuba uqalise ibhare .
Qala ukuzalisa incwadi yakho yebhile ngolwazi malunga nokulinga. Ingcinga efanelekileyo yokudweba itafile yakho yedatha kusengaphambili ngoko konke okufuneka ukwenze kwibhabhi uzalise ngamanani.
Ukuphonononga amaxwebhu e- Data Safety Safety (MSDSs) zeekhemikhali oza kusebenzisa ngexesha lebhu.
Qinisekisa ukuba unayo yonke i-glassware, izixhobo, kunye neekhemikhali ezifunekayo ukugqiba lebhu phambi kokuqala nayiphi na inqubo yenkqubo.
Qonda iinkqubo zokulahlwa kweekhemikhali kunye nezinye izinto ezisetyenziselwa ukuzama kwakho. Ukuba awukucaci malunga nento oyenzayo ngokuzama kwakho emva kokuba igqityiwe, cela umqeqeshi wakho ngalo. Musa ukuphosa izinto kwi-udoti okanye ukulahla i-liquids phantsi kwe-drain okanye kwindawo yokulahla inkunkuma uze uqiniseke ukuba uyamkeleka ukwenza njalo.
Yilungele ukuthatha idatha kwilebhu. Yizisa i-notebook yakho, ipeni, kunye ne-calculator.
Yiba nephepha lokhuseleko lomntu, ezifana neengubo zelabhu kunye neebhogi, zicocekile kwaye zikulungele ukusebenzisa ngaphambi kwebhu.
Imithombo yeLebistry Lab
Ukuqonda iPropropylene Plastics
Kutheni Iintshi Zitshintsha Umbala kwi-Fall?
Nguwuphi ooMongameli abafa ngexesha bekhonza e-Ofisi?